Sannad kale, taariikh kale, waayo-aragnimo kale oo aan caadi ahayn… Taasi waxay ii ahayd YII2019! - Geofumadas
Sannad kale, taariikh kale, waayo-aragnimo kale oo aan caadi ahayn… Taasi waxay ii ahayd YII2019!
Markii la ii sheegay inaan fursad kale heli doono si aan uga mid noqdo dhacdooyinka Kaabayaasha Dhaqaalaha ee ugu weyn sanadka, waxay iga dhigtay inaan ku qayliyo farxad. YII2018 ee London, ka sokow inuu ka mid yahay meelaha aan ku jeclahay fasaxyadayda, waxay ahayd waayo-aragnimo aan caadi ahayn oo lala yeeshay wareysiyo gaar ah oo lala yeeshay maamulka sare ee Bentley Systems, Topcon iyo kuwa kale, muxaadarooyin firfircoon iyo fadhiyo si heer sare ah xog-ogaal u ahaa. Bentley Systems waxay soo nooleysay fikirka ah "mataanaha dhijitaalka ah" iyo sida ugu wanaagsan ee markhaati looga noqon karo kacdoonka ka jira warshadaha dhismaha marka loo eego kuwa wax dhisa naftooda. Kaabayaasha kaabayaasha dhaqaalaha waxay isu keeneen hoggaamiyeyaal feker ka leh ku dhowaad warshado kasta iyo wadaagga aqoonta, isku xirka, iyo iskaashiga dhacay oo ka baxsan ereyada.
Waxaan ku sugnaa meeshii saxda ahayd si aan u sii huriyo hamigayga ku saabsan wax ka qorista warshadaha dhismaha. Laga soo bilaabo Akadeemiyada Hormarinta Dijital si loo isticmaalo kiisaska, waxaan doonayay inaan qabsado wax walba oo xusuustayda ku jira ka dibna u rogo sheeko gaar ah. Ka buuxaan aqoon, markaan soo noqday, waxaan awood u yeeshay inaan u abuuro akhristayaashay qoraal xoog leh. Rabitaankii ahaa in lala kulmo halyeeyada warshadaha dhismaha sanadka soo socda wuu noolaa oo wuu fiicnaaday, intaas oo dhana waa tan iyo markii Singapore ay aad ugu dhowdahay guriga. Aniga oo kaliya 5 saacadood iyo 55 daqiiqo oo waqtiga duulimaadka ah, ma seegi karin!
Waxay timid Oktoobar 20, 2019 waxaanan ku sugnaa Marina BaySands, Singapore. Markii aan sahmiyey aaggooda barkadda 'Infinity pool', xamaasaddaydu way laba-laabantay. Waa yaab dhisme keligeed, sida magaalo yar oo leh suuq laga dukaameysto, xarun carwadeed, goob lagu caweeyo, qamaar, maxkamad cunto iyo wixii aan dheeri aheyn ...
Maalinta warbaahinta ee la sugayay ee YII2019 waxay bilaabatay subaxnimadii wanaagsanayd ee Oktoobar 21. Shirka jaraa'id ee aadka loo xoojiyey ayaa shaaca ka qaaday warar muhiim ah sida:
Nidaamyada Bentley iyo Nidaamka meelaynta ee Topcon waxay bilaabaan iskaashigooda dhismaha dhijitaalka ah.
Nidaamyada 'Bentley Systems' waxay ku xoojineysaa sadaqooyinka Digital Cities iyadoo la helayo Citilabs iyo teknolojiyada dhismayaasha geospatial.
Hawlaha Dhismaha dhijitaalka ah waxay ku dhawaaqeysaa bulshada ay iskaashanayaan iyo iskaashiga ay la leeyihiin O3 Xalka si loo taageero adeegyada xirmada shaqada ee horumarsan.
Geofumadas wuxuu kaqeybgalay dhacdadan 11 sano oo xiriir ah, kiiskeyga waa markii labaad iyo markii ugu horeysay oo qeyb ka ah majaladda TwinGeo / Geofumadas. Wareysiyada degdega ah ee lala yeeshay maamulayaasha sare ee Bentley Systems waxay ahaayeen waayo aragnimo farxadeed oo balaarisay aqoontayda mataanaha dhijitaalka ah, injineernimada cilmiga geotechnical, injineernimada qaabdhismeedka, magaalooyinka dhijitaalka ah, iyo wax badan ...
Kasbashada, xidhiidhka asxaabta iyo saaxiibada cusub inta lagu jiro qadada iyo nasashada shaah ayaa daqiiqad kasta ku raaxaystay; Waxaan runtii ku qaatay nuxurka maalintaa tweet-kaas oo noqday caan caan ah.
Waxaan halkaan u joogaa inaan ku raaxeysanayo n isbeddel daqiiqad kasta ah .. sanadkii labaad waa khibrad si isku mid ah u xiiso badan ☺️ #YII2019 @BentleySystems @GolgiAlvarez @christinebyrne pic.twitter.com/dNfIUrn82K
Maalintii dhacey waxaa la soo gabagabeeyey casho qayaxan oo loo soo agaasimey Clifford Pier xiisaha badan ee Hotelka Fullerton Bay.
Maalmaha soo socda, Oktoobar 22, 23 iyo 24 iyada oo loo marayo kal-fadhiyo xiiso leh oo ACCELERATE ah, xog-wareysiyo warshadeed, ayaa iga caawiyey inaan dhexgalo adduunka mataanaha mataanaha ah. Had iyo jeer waxaan ku foorarsanahay ogaanshaha sida wax loo adeegsanayo iyo wadista isbeddelka adduunka dhabta ah, kiisaska isticmaalka iyo soo bandhigista kama dambaysta ah ayaa igu kalifay. Habeenka 'YII-Awards' oo leh quruxdiisa iyo dhoola caddeyntiisa ayaa u baahan xusuus gaar ah.
Ogeysiisyada ugu waaweyn ee lagu sameeyay dhacdada waxay ahaayeen:
Nidaamyada 'Bentley Systems' waxay soo bandhigayaan Adeegyada Mataanaha ah ee Mataanaha ah ee Adeegyada Mataanaha ah iyo Adeegyada Digital Mataanaha Digital Open ee hantida iyo waxqabadka shabakadda.
Fasalkaaga adigu wuxuu ku dhawaaqayaa isku xirnaanta manhajka dugsiga ee Nidaamka Bentley.
Nidaamka Bentley wuxuu ku biiraa xubin xubin ka mid ah oo caalami ah - wuxuu shaaciyaa taageerada IFC ee mataanaha dhijitaalka ah.
Nidaamyada 'Bentley Systems' ayaa ku dhawaaqaya adeegyada cusub ee daruuriga ah ee isku-xirka injineernimada kaabayaasha dhijitaalka ah.
By Shimonti Paul, Tafatiraha La-tashiga, TwinGeo
Post Previous" Hore Howlaha daruuriga ah ee cusub ee loo yaqaan 'Twinwin Infrastructure Injineernimada'
Post Next Geo-Engineering & TwinGeo Magazine - Daabacaad LabaadNext »